Burmese ESL, Myanmar English, Learn English at EnglishSpeak.com
မူလစာမျက်နှာ | သင်ခန်းစာ ၁၀၀ | အများဆုံးသုံး စကားစု ၁၀၀၀ | အများဆုံးသုံး စကားလုံး ၁၅၀၀ | ပံ့ပိုးမှု
ဘာသာစကားရွှေးချယ်ပါ: English الْعَرَبيّة Bahasa Indonesia Bengali Burmese Chin Deutsch Español Français हिन्दी 日本語 한국어 Portugues Pусский ไทย 繁體 Tiếng Việt 中文
- 中文 သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ESL အဆက်အသွယ်များ သင်ခန်းစာများ | ဝေါဟာရများ | စကားစုများ “အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရန် အကောင်းဆုံး ကိရိယာ" - Language မဂ္ဂဇင်း
Englishspeak.com ဆိုတာဘာလဲ? Englishspeak.com သည် အင်္ဂလိပ်စာ စကားပြော လေ့လာရန် အခမဲ့ နှင့် ဆုရ စံနစ် အသစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်တွင် အင်္ဂလိပ် အသံထွက် နှင့် နေ့စဉ်သုံး စကားများ ကို ဦးစားပေးထားသည်။ သင်ခန်းစာပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် Englishspeak.com အသံထွက် ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ထားရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် ပြန်လှန်နားထောင်ရန် နှုံး ၂ မျိုးပါရှိပါသည်။
Englishspeak.com ဘာလို့ လိုအပ်သလဲ? ယခင်က စကားပြောရန် ပြဿနာ ရှိသူ အများစု သည် သူတို့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရာတွင် အားနည်းသည် ဟု အယူအဆမှား နေကြပါသည်။ တကယ်တမ်း မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း အများစု သည် စကားပြောရန် အတွက် သီးသန့် ပြင်ဆင်ထားခြင်း မဟုတ်၍ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ အများစု ၏ ပြဿနာမှာ စကားပြောရန် အတွက် သီးသန့် အထူးပြုထားခြင်း မဟုတ် ၍ ဖြစ်သည်။ ၎င်း သင်ထောက်ကူပြု ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသူများသည် အသံထွက် မှားယွင်း၍ ပြဌာန်းစာအုပ် ဖတ်နေ သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်တန်းသားများ သည် ၎င်းတို့ အချင်းချင်း လေ့ကျင်မှုများပြုလုပ်၍ မွေးရာပါ ပြောသူများ နှင့် မလေ့ကျင့်၍ အသံထွက်များ ယွင်းချင်း နှင့် အလေ့အထဆိုးများကြောင့် တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ပေ။
အသံထွက် ပေါင်း မြောက်များစွာရှိခြင်း။
ပုံမှန် နှင့် အနှေး နှုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းများ။
အသံထွက်၊ ဘာသာပြန်၊ အဓိပ္ပာယ် နှင့် စကားလုံး များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ဝေါဟာရ နှင့် စကားစု ပေါင်း ၂၅၀၀။
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ တိုင်း သည် အသုံးပြုသူနှင့် မွေးရာပါ စကားပြောသူတို့ အကြားပြောနိုင်ရန် ဖန်တီးပေးထားခြင်။ အသုံးပြုသူများသည် ဖြစ်ရပ်မှန် အခြေအနေများ နှင့် အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းများ ကို အသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံး များ နှင့် အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါများ ကို အသုံးပြု​နိုင်ခြင်း။ အသံထွက်နှင့် ပတ်သတ်၍ အထူးအလေးပြုထားပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ပုံမှန် နှင့် အနှေး နှုံးများ ကို အသုံးပြု၍ အပြန်အလှန်စကားပြောများ၊ စာကြောင်းများ နှင့် စကားလုံးများ ကို နားထောင်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကာဆာတံ ကို စကားလုံးပေါ်တွင် ထားလိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ကြားသူမှ ဖြေးညှင်းစွာ အသံထွက်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာမှ ထုတ်လုပ်ပေးသော အသံမဟုတ်ပါ။
မူလစာမျက်နှာ သင်ခန်းစာ ၁၀၀ အများဆုံးသုံး စကားစု ၁၀၀၀ အများဆုံးသုံး စကားလုံး ၁၅၀၀ ကျွန်ုပ်တို့ ကို ဆက်သွယ်ရန် Copyright, 2009, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved. မူပိုင်ခွင့်၊ ၂၀၀၈၊ EnglishSpeak.com LLC. မူပိုင်ခွင့်များ အားလုံးထိနး အားလုံ